कस्तो हुनेछ तपाईको वैवाहिक जीवन ? हातको औंलाले खोल्छ यस्तो राज - IAUA
कस्तो हुनेछ तपाईको वैवाहिक जीवन ? हातको औंलाले खोल्छ यस्तो राज
ramkrishna October 15, 2017	कस्तो हुनेछ तपाईको वैवाहिक जीवन ? हातको औंलाले खोल्छ यस्तो राज
भनिन्छ जीवनसाथी यदि राम्रो छ भने जीवन स्वर्ग बन्छ । तर यहि कुरा विग्रीयो भने जीवन नर्क बन्छ । त्यसैले जो कोहिको पनि यो जान्न जरुरी छ कि हाम्रो जीवनसाथी कस्तो हुन्छ ? र उसको व्यवहार कस्तो हुन्छ ?
तपाईको औला बताउन सक्छ कि तपाईको जीवनसाथी कस्तो हुन्छ ? समुन्द्र शास्त्रमा केहि कुरा उल्लेख गरिएको छ जीवनसाथी सँग जोडिएको । जसले भविष्यमा तपाईको जीवनसाथी कस्तो हुनेछ भन्ने जनाउँछ ।
Previous Previous post: ज्ञानगुनका कुराहरु | gyangunka kura
Next Next post: आँखाको नानी खैरो हुने ब्यक्ति प्रभावशाली, अरु के हुने मानिस कस्तो ?